Nokia ဖုန်းတွေမှာ application သွင်းရင် Certificate error မဖြစ်တော့အောင် Hack နည်း
How To Download : ဒေါင်းလော့ချနည်း 1. Click on the download links<->Download link ကိုနှိပ်ပါ 2.
How To Download : ဒေါင်းလော့ချနည်း 1. Click on the download links<->Download link ကိုနှိပ်ပါ 2.Adf.ly လင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး Browser မှာထည့်ပါ Wait for5seconds and then click <->နှိပ်ပြီးနောက်5second စောင့်နေပါ နောက် SKID AD ကိုနှိပ်ပါ Adf.ly လင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး Browser မှာထည့်ပါ Wait for5seconds and then click <->နှိပ်ပြီးနောက်5second စောင့်နေပါ နောက် SKID AD ကိုနှိပ်ပါ My Facebook Liked?
မဟုတ်ရင် ၀င်ပြီး like လုပ်သွားပါ
♥♥♥ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းတွင်ရှိမရှိ သိနိုင်ရန် နှင့် တစ်ခုခုပြောလိုပါက ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက် ပြောဆိုနိုင်ပါသည် ♥♥♥
စာဖတ်သူများ အတွက် Make Money Links များ
» blogspot နည်းပညာ
» အသုံးချ နည်းပညာများ
» Nokia ဖုန်းတွေမှာ application သွင်းရင် Certificate error မဖြစ်တော့အောင် Hack နည်း
Ditulis oleh: Akar Phyoe - Nokia ဖုန်းတွေမှာ တစ်ချို့ application တွေသွင်းရင် Certificate error ဆိုတာမျိုး ပြပါတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင် အရင်က တရုတ် website တွေမှာ ဖုန်းရဲ့ IMEI number နဲ့ certificate လျှောက်ပြီးမှ သွင်းရပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒါတွေလည်း မရတော့ပါဘူး။
အရင်ဆုံး ဖုန်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ဖုန်းရဲ့ memory card location ကွန်ပျူတာမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ဖုန်းရဲ့ memory card location က E:/ ဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။
တကယ်လို့ဖုန်းရဲ့ memory card location က F:/ ဆိုရင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။
ကိုယ့် Drive နဲ့ဆိုင်တဲ့ zip ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် zip ဖြည်လိုက်ရင် Private ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ folder လေးတစ်ခုရလာပါမယ်။
အဲဒီ folder ကို ဖုန်း memory card ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။ ‘Private’ folder ကိုထည့်ရာမှာ ဖုန်း memory card ရဲ့ ဘယ် folder အောက်ကိုမှမထည့်ပါနဲ့ ။
Memory card ရဲ့ main directory အောက်မှာပဲထည့်ပါ ။ ဥပမာ – memory card ရဲ့ Drive location က F: ဆိုရင် ‘Private’ folder လေးကို F:\_ အောက်မှာပဲ
ပြီးရင် Dr.web Antivirus ကိုရယူလိုက်ပါ။
Dr.web Antivirus အားရယူရန်
Dr.web antivirus ကို download ရယူပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် Dr.Web Antivirus ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
Dr.Web Antivirus ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် Option ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Quarantine ထဲကိုဝင်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်းပါ။
Quarantine ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင် Option ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Select all ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်းပါ။
ပြီးရင် option ကိုပြန်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Rom Patcher Plus ကို ဖုန်းထဲကိုသွင်းရပါမယ်။ အောက်မှာရယူလိုက်ပါ။
Rom Patcher Plus အားရယူရန်
download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Rom Patcher Plus ထဲကိုဝင်ပါ။
ပြီးရင် install server RP+ v1.4 နဲ့ Open4all RP+ ကို နှိပ်ပါ။ နှစ်ခုစလုံးကိုနှိပ်ပြီးရင် ဘေးက icon လေးမှာ အစိမ်းရောင်လေးတွေဖြစ်နေရပါမယ်။ အောက်ပုံအတိုင်းပါ။
ဒါဆိုရင် certificate error မဖြစ်အောင် hack လို့ပြီးပါပြီ။ အရင်တုန်းက ဖုန်းထဲမှာ သွင်းရင် certificate error ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ application တွေကို ဖုန်းထဲမှာ သွင်းကြည့်ပါ။
certificate error မဖြစ်တော့ဘဲ အဆင်ပြေပြေသွင်းလို့ရသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီပို့စ်ကို PDF ဖိုင်လိုချင်ပါ ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
တစ်ခုခုပြောလိုပါက Click ပါ
How To Download : ဒေါင်းလော့ချနည်း 1. Click on the download links<->Download link ကိုနှိပ်ပါ 2.Adf.ly လင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး Browser မှာထည့်ပါ Wait for5seconds and then click <->နှိပ်ပြီးနောက်5second စောင့်နေပါ နောက် SKID AD ကိုနှိပ်ပါ akar
basic software for window(15)
Ebooks And knowledges(142)
Gmail And Gtalk(82)
Graphics And Design(169)
Internet And Other(187)
Mutimredia and converters(45)
Premium user အဖြစ်ဒေါင်းနည်း(17)
Wi Fi အကြောင်း(20)
window registry အကြောင်း(15)
ကိုယ်တိုင်ရေး သုတရသ စာပေများ(5)
Oct 10 (66)
Enter your email address: www.akarphyoe.com
Copyright © အာကာဖြိုး (နည်းပညာ). Template Modfly By akarphyoe